Makelọ ọrụ mejupụtara ihu, ndị na - ebunye ya - China ndị na - emepụta ihe na - eche ihu
OEM Face Mee-elu Fixer ịgba 120ml moisturizing mmanụ akara fechaa Microfine alụlụ Makeup Setting Spray
Gịnị mere mwube ịgba? Ntọala a na - agba agba ga - enyere aka belata ihu igwe nke ihu, na - enyere ihe ntecha aka ịgbaso anụ ahụ. 2. Mechie etemeete ebe. Mgbe anụ ahụ dị na ihu dị oyi ma etemeete na-agbatịkwu oge, ọ dị mfe maka ịtọ ntọala iji kpochie etemeete ahụ. Gịnị Ka Ọ Bụ? Ihu ihe mmezi nke ihu bụ ngwa agha nzuzo gị na enweghị ntụpọ. Usoro a nwere aloe, tii na-acha akwụkwọ ndụ, Kukumba, na vitamin A, C, na E iji mee ka akpụkpọ ahụ dị jụụ. Gba na ahịhịa gị ma ọ bụ ...
Full mkpuchi mmiri mmiri concealer 6ml matte imecha 16 awa ogologo na-adịgide adịgide etemeete concealer na elu mma
Full mkpuchi Matte mmiri mmiri concealer J202 a zuru-mkpuchi, 16-hour eyi concealer nke conceals, gbazie, contours na pụta ìhè maka-enweghị ntụpọ akpụkpọ.
Ngwunye na-enweghị ntụpọ na-enweghị mmanụ Liquid ntọala zuru oke mkpuchi 20ml na-adịgide adịgide etemeete na SPF15
Ngwunye Liquid na-enweghị ntụpọ J203 mkpuchi zuru oke, ịdị arọ, atụmatụ dị na usoro enweghị mmanụ karịa ka ọ na-agwakọta n'ime anụ ahụ maka ọmarịcha akụkụ nke mara mma nke na-adịgide ụbọchị niile, Ọ na-enyere aka ịhazigharị ederede anụ ahụ na anyị nwere 40 shades , zuru oke dakọtara maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị anụ ahụ niile.
N'ogbe Silky Liquid Foundation 8 agba Weightless 30ml na eke creamy udidi na Moisturizing Formula
Nke a Silky Liquid Foundation bụ Weightless, ezigbo udidi, atụmatụ na moisturizing usoro, ọ nwere ike na-enyere ike a creamy ntọala etemeete na ọ ga-adịgboroja mgbe yi na ihu.
Onwe nke Label etemeete ime iha mmiri Waterproof Soft Mineral Enwe ntụ ntụ 5 agba Cheek Blusher etemeete ime ihiere palette
Gịnị Ka Ọ Bụ? Nke a velvety soft powder blush na-anapụta agba agba ogologo oge maka mmetụta dị nro dị nro. Layer n'elu ntọala na concealer ma ọ bụ eyi naanị maka zuru okè jikọtara anya. A cushiony ntụ ntụ ime ihie na ezi-maka-anụ Efrata na-enye a eke na buildable iwepụ nke agba. Ọ na-enye ọmarịcha mmetụta dị nro na-enwu gbaa ma na-enwu gbaa. Item NO J0207 Brand Jinfuya or Make Your Own Brand Texture Mineral Blush, pigmenti usoro. Kwesịrị ekwesị maka nwere ike dakọtara na ...
Etemeete Primer zuru oke maka ụdị anụ ahụ niile Matte Finish Mineral Infused Face Primer maka Mepụta Isi Na-adị Mkpa
Gịnị Ka Ọ Bụ? Ralnweta ihu bụ ihe nzuzo gị ka ọ bụrụ ihu na-enweghị ntụpọ. Mgbe etinyere gị tupu etemeete gị, ntọala a ga-enye ihu gị ihe nwatakịrị dị ka nke ọma, na-eme ka ọ dị elu ka ọ na-alụ ọgụ na mmanụ na nkụ. Ọ na-ekwe ka ntọala gị rụọ ọrụ ya ma ghara ịrapara na ebe ndị na-ezighi ezi mgbe ị na-ebute palette gị (ihu) maka ntụ ntụ ma ọ bụ ihe ndozi zuru oke - ị kpebiri. A na-ekesa Jinfuya iji mee ka ịma mma kachasị mma nweta anya, egbugbere ọnụ, na ihu niile. Ebumnuche gị enweghị njedebe, na ...
Highlighter Etemeete Palette Ihu Highlighter Ghere Waterproof Long-adịgide adịgide Amamiihe Skin Agba Ihu ngwe ntụ ntụ
Gịnị Ka Ọ Bụ? Highlighter palette bụ creamy ezigbo usoro nke Kaleidoscope palette glides na akpụkpọ na-eji ire ụtọ n'elu udidi ka megide accentuate ya. Nke a na-atọ ụtọ na akpụkpọ ahụ tozuru oke dị ka usoro a agaghị egosi na ahịrị ọma na pores. Item NO J2222 Brand Jinfuya or Make Your Own Brand Texture 100% eke na ọgaranya dị iche iche organic Efrata. Emepụtara na-enweghị gluten, nchekwa, na artificial pigmenti. Adabara maka na 4 eke shad ...